Sezvo MacBook Air inopemberera iri gore regumi tinobvunza kana paine ramangwana reiyo isisina kunyanya kuchena MacBook. Ko 2018 rinenge riri gore iro Apple inobvisa iyo MacBook Air kubva pamutsetse wayo kumusoro, kana iyo kambani ichatishamisa neiyo nyowani MacBook Air modhi?
Muchikamu chino, tinotenderera runyerekupe rwese, matipi uye matipi nezve izvo zvinotarisirwa-zveMacBook Air kuburitswa, kusanganisira tech specs, zvitsva maficha, dhizaini, pamwe nekufungidzira kuti Apple inogona kunge ichidzinga iyo 'Mhepo' mutsara.
Zvinoita kunge MacBook Air nyowani inogona kunge iri munzira! KGI Securities muongorori Ming-Chi Kuo Apple iri kuronga kuunza modhi nyowani yeMacBook Air ino chitubu - uye iwe unogona kutarisira kuti ive isingadhuri. Verenga pamusoro kuti uwane zvimwe.
Kutenga kuraira kune chekuita neApple ikozvino laptop yemhando, verenga zvedu Yakanakisa MacBook yekutenga chinyorwa uye Zvakanakisa zvinodhura MacBook inobata zvinyorwa. Isuwo tine Yakanakisa Mari chinyorwa Mac, MacBook Air ichiri sarudzo, izvozvi…
Iwe unogona zvakare kuona yedu-yekumira gwara kune nzvimbo yakanaka yekutenga chero Mac. Zvakare, kana iwe uri kushamisika kuti sei 13in MacBook Pro ichifananidza kune iyo 13in MacBook Air kuverenga izvi: MacBook Pro vs MacBook Air enzanisa ongororo.
2018 MacBook Air kuburitsa zuva
Kunyange zvichikwanisika kuti Apple haichazombo gadziridza iyo MacBook Air zvakare, imwe tariro inoramba iri mune iyo Apple yakaratidza kuti imwe yakachipa Mac, iyo Mac mini, "ichiri kukosha" kwairi zvichitungamira kutarisira kuti Mac mini ichave yakagadziridzwa. Sezvo iyo Mac mini uye MacBook Air vari vaviri vari kushandisa imwechete chizvarwa processor machipsi izvozvi, uye sezvo ese maMacs ari munzvimbo yepazasi kumagumo emitengo yeApple, zvinogona kunge kuti maMac ese ari maviri achagadziriswa panguva imwe chete.
Zvinotaridza kuti kuchine musika wakakosha weMacBook Air. Sekureva kweBloomberg zvinyorwa pamberi peWWDC 2017: "Kambani [Apple] yakafunga zvakare kuvandudza iyo yakwegura 13in MacBook Air ine processor nyowani sekutengesa kweLaptop, yakachipa pane Apple, inoramba yakasimba zvine simba," akanyora Bloomberg pamberi peWWDC.
Sekureva kwa KGI weSecurities muongorori Ming-Chi Kuo, izvo zveshuwa zvinogona kusvika ichi chitubu. Anoti Apple iri kuronga kuunza mhando nyowani yeMacBook Air ino mukota yechipiri ya 2018.
Pahwaro uhwu isu tingaone MacBook Mhepo yakagadziridzwa mumatsutso a2018, pamwe ichiwirirana ne Chiitiko cheKurume, kana pane ichangoburwa kuApple's WWDC munaJune.
2018 MacBook Mhepo: Mutengo
Paakatangisa iyo yekupinda-level 13in modhi yakadhura £ 849. Pa £ 949, iko zvino kuri kuita $ 100 inodarika yawakaita ipapo. Kuita kuti zvinhu zviwedzere kushata, iyo pamberi pe11in MacBook Air yakaiswa danho muna Gumiguru 2016, unogona kuwana 11in MacBook Air nokuti £ 749. Saka mutengo wekutenga MacBook Air zvino wave mazana maviri emadhora kupfuura zvaungadai wakaita makore maviri apfuura, asi muchina wacho wakangofanana.
Tichifunga nezve nzvimbo yeMacBook Mhepo muApple chigadzirwa chigadzirwa kumusoro tinonzwa kuti yakanyanya-mutengo pamutengo unosvika chiuru chemadhora kune iyo inonyanya kuve yemakore matatu-makore komputa. Nekudaro, isu hatifunge kuti isu tichaona mutengo uchidonha zvakare kana Apple ikaigadziridza.
Takambotaura kare kuti zvaisaita kuti MacBook Air iite mari isingasviki £ 949. Nekuti Apple haidi chaizvo kuti chero munhu atenge, Apple inoda kuti vanhu vaone kuti vanogona kuwana Mac iri nani kwemazana mashoma mapaundi.
Nekudaro, muongorori weKGI weSecurity anoongorora Ming-Chi Kuo anotenda kuti Apple ichagadzirisa MacBook Air nekudzikisa mutengo. Anoti nekuunza nzira itsva yeMacBook Air, pamutengo wakaderera, Apple ichakwanisa kusundidzira kutumirwa kweMacBook negumi muzana muzana gore rino.
Nekudaro, iyo MacBook Air inogona kuramba ingori chiredzo chinoita kuti Apple itengese MacBook kana MacBook Pro kune vanogona kuve vatengi. Kana Apple ikadzora mutengo mberi izvo zvichave zvakanyanya kutengesa.
Panzvimbo pekudonha mutengo weMacBook Air, kwenguva yakareba isu takafunga zvakanyanya kuti Apple ichadonha mutengo weMacBook kana iyo 13in MacBook Pro uye kurega MacBook Air.
Iyi dzidziso yakavakirwa pane yakati wandei nhoroondo yeApple: Pakatanga MacBook Air yaive yakawandisa pamitengo, sezvakaita Retina MacBook izvozvi. Panguva iyo MacBook Air yakavhurwa muna2008 yekupinda-chikamu Mac laptop yaive yekare MacBook modhi - iwo aive aruminiyamu, kozoti machena uye matema, uyezve pakupedzisira aluminium zvakare.
Nekufamba kwenguva mutengo weMacBook Air wakadzikira uye iwo akakwegura eMacBook mhando akanyangarika kubva mutsara.
Zvinotaridzika kuti zvakafanana zvichaitika pamwe neMacBook mitsva pakupedzisira inotsiva iyo MacBook Airs, pamutengo wakaderera.
Kusvikira Apple yakagadzirira iyo MacBook mutengo yekudonha kusvika pasi pegumi pamadhora, uchiiunza mukuwirirana neiyo ikozvino yekupinda-chikamu cheMhepo, unogona kutarisira kuti kambani irambe ichitengesa Iwo Mhepo. Pangosvika iyo Mutengo weMacBook unodzikira, tarisira kuti Mhepo ipere.
Kunyange hazvo, nekuchengeta MacBook Air mumutsara kumusoro, Apple inokwanisa kuenderera kutengesa iwo MacBook neMacBook Pro modho pamutengo wakakwira.
Imwezve mukana ndeyekuti Apple ichadonhedza MacBook Air range ichitsiva neinodhura mitengo MacBook Pro. MunaJanuary 2017, DigiTimes yakaratidza nzvimbo yeChinese Yekushandisa Nhau Dzepasi Pese uye akati Apple iri kudzikisa mutengo weiyo isiri-Kubata Bar 13in MacBook Pro uye kusiya MacBook Air.
Muna 2017 iyo 13in MacBook Pro mutengo hauna kudonha, asi izvo Apple zvairi kupa pamutengo wekupinda-chikamu zvakavandudza - kare 13in modhi yaive chizvarwa chekare, asi muna 2017 modhi yekupinda-nhanho yakawana yakafanana yeKaby Lake machipisi se mamwe mamodheru eMacBook Pro.
Kunyange paine zvikonzero zvakawanda nei zvichitaridzika kuti Apple haizoramba ichitengesa MacBook Air, pane chimwe chikonzero nei Mhepo ichigona kurarama. Apple yaizoda kuveura £ 250 kubva pamutengo weinopinda-chikamu MacBook kana 13inMacBook Pro kuunza pasi pe £ 1,000 / $ 1,000 (parizvino iri £ 1,249 / $ 1,299). Kusvikira iyo kambani yagadzirira kudzikisa mutengo weimwe MacBook mamodheru neiyo yakawanda isu hatitarisiri kuti ibvise yakaderera mutengo modhi kubva mumutsetse.
Zvichida gore rino harisi iro gore rekurasikirwa neMacBook Air kunyangwe - panzvimbo peizvozvo Apple inogona kupemberera kuvapo kwemuchina wemakore gumi apfuura uyu. Tarisa Apple Steve Jobs afumure iyo MacBook Air paMacworld Expo San Francisco musi wa15 Ndira 2008:
2018 MacBook Mhepo: Mhando
Chaizvoizvo, iyo MacBook Air haina kuchinja zvakanyanya mumakore mashoma apfuura, kunze kwekuwedzera kwe RAM (4GB -8GB) muna Kubvumbi 2016 uye nekukurumidza processor (1.6GHz - 1.8GHz) muna Chikumi 2017.
Ndicho chokwadi chekuti Apple yanga ichinyatso kuvandudza iyo Mac nezvingave zvakave zvekuvaka-ku-odha sarudzo pane yekutanga 2015 modhi, pane kuunza izvo zvinhu kuti zvienderane nemamwe maMac ari munzvimbo, uye mamwe makomputa pamusika, izvo ane mafani akanetseka.
Iyo yazvino modhi inopa gumi nembiri-maawa ehupenyu hwebhatiri, 12-centimeter (panzvimbo yakatetepa) dhizaini uye inorema 1.7kg. Kutenda kune iyo inogadziridza kutumira kwayo 1.35 kuvhurwa, ikozvino inopa 2015GB RAM pamwe ne8GHz i1.8 Broadwell processor seyakajairwa. Iwe zvakare uchawana iyo sarudzo yeayo 5GB kana 128GB flash chengetedzo uye Intel's HD Graphics 256 makadhi.
Hatitarisiri iwo maficha kuti achinje zvakanyanya kana Apple ikagadzirisa MacBook Air, kunze kwekuunzwa kweprosesa nyowani uye kadhi yemifananidzo yakabatanidzwa. Tinogona zvakare kuona USB C. Verenga pamusoro kuti uwane zvimwe nezve izvo izvo zvitsva MacBook Air inogona kupa.
Kudzoka munaKurume 2015 isu takanga tichitarisira kuti Apple ipe iyo MacBook Air neRetina kuratidza - makore gare gare uye ichiri isina imwe.
Apple payakagadziridza MacBook Air yayo munaKurume wa2015, isu tanga tagutsikana kuti kambani iyi yanga yave kuda kupa laptop iyo Retina kuratidza. Panzvimbo iyoyo, yakatangisa mhando nyowani yeMacBook iyo iri yakatetepa, yakapenya-mwenje uye inopa iwo ekumusoro-resolution resolution, asi zvinoreva here kuti Apple haizokwidziridze MacBook Air neRetina inoratidzira mune ramangwana?
Kana Apple ichida kuchengetedza mutengo pasi pamwe kwete. Tsvaga uone kuti chii chinoratidzwa naRetina apa: Chii chinonzi retina chiratidziro?
Zvinogoneka kuti MacBook Air nyowani yaigona kutumira nemachipisi ayo anotsiva chizvarwa cheKaby Lake, asi izvo zvinogona kunge zvisingaite kunze kwekunge iyo MacBook Pro yaonawo kugadzirisa kune icho chizvarwa che processor.
Mhepo inogona zvakare kushandisa zvimiro zveiyo Intel processors iyo MacBook inoshandisa - iyo Core M yakateedzana.
USB-C / Thunderbolt doko
Isu tinofungidzira inotevera MacBook Mhepo icharatidza USB-C zviteshi - izvo zvinobatsira zvakapetwa seThunderbolt chiteshi, mushumo unobva kuTaiwanese webhusaiti DigiTimes inoita kunge inosimbisa dzidziso yedu. Inoti Apple iri kuronga kuburitsa MacBook Air ine USB-C zviteshi mune ramangwana, asi haipe nguva yekumisikidza yeiyo yakakwidziridzwa laptop.
“Parizvino, Apple yasarudza kushandisa USB Type-C interface yeMacBook Air yayo, nepo Asustek Computer neHewlett-Packard (HP) vari kusimudzira imwe yemabhuku avo e-notibheki enguva dzose yeUS-Type-C. Lenovo, Acer naDell vachiri kuongorora sarudzo iyi, ”maererano neshumo iyoyo.
Iyi inoratidzika sedanho rinonzwisisika; the MacBook ine imwe chete USB-C doko uye iyo MacBook Pro itsva zvakare inoratidza iyi yekubatanidza mhando. Izvo zvaizoramba zvichimiririra kushinga kufamba kwese kweApple, zvisinei zvaizoreva kuti malaptop ayo ese aisazokwanisa kutsigira zvakajairwa USB-A kubatana, danho rine chokwadi rekutsamwisa vanhu vashoma, asi pakupedzisira rinogadzira ramangwana rekomputa yemagetsi.
Bata ID uye Fambisa Kubata
Tinotarisira kuti chimiro ichi chiuye paMhepo modhi - kana chisina kumiswa!
Kune zvakare mishumo inoratidza kuti inozozvirumbidza Bata ID mukati meTrackpad yayo, iyo inogona kuwana iyo Simbisa kubata kusimudzira iyo yakapihwa iyo 13in MacBook Pro kumashure munaKurume 2015 uye inouya neMacBook itsva.
Kugunzva ID ndiyo inzwa yeminwe yeminwe iyo yakavakirwa muImba bhatani reiyo iPhone 5S, iPhone 6 uye iPhone 6 Plus uye kupfuura. Inoshandiswa zvakare kuita kuti Apple Pay ive yakachengeteka zvakanyanya uye nechazvino chiziviso cheApple Pay ichiuya kuMac sechikamu cheMacOS Sierra, runyerekupe urwu runonzwisisika.
Maererano neimwe sununguka ripoti, Bata ID yeiyo Mac mutsara yaizoda chip yakatsaurirwa kuvakwa mumushini.
Runyerekupe rwakatanga neTaiwan Blog AppleCorner, iyo yakadudza zvinyorwa kubva mumutengo wekutakura. Sezviri pachena, iyo Magi yeMagineti neMaginari Trackpad inogona kuwana yakagadziriswazve, zvichigonesa vashandisi kuita Apple Pay mubhadharo pawebhu, asi zvese izvo zvishandiso zvakagadziridzwa pamwe nekutanga kweiyo 4K iMac saka izvozvo zvinoita sezvisingaitika chero nguva munguva pfupi. (Verenga nezve chii chingave chiripo kuMacac muna 2018 pano).
Iyo yazvino MacBook Air specs
Apple yekupedzisira yakagadziridza MacBook Air kuWWDC munaJune 2017 (verenga redu MacBook Air (2017) ongorora pano). Nekudaro, iyo yekuvandudza yaingove shanduko yaive yekuti Apple yakachinja iyo 1.6GHz Broadwell processor ye1.8GHz Broadwell processor. Broadwell ndicho chizvarwa cheIntel processor kubva muna 2014/2015.
Saka zvakanyanya izvo 'kugadzirisa' kune iyo MacBook Mhepo muna 2017 yakangoita yekuvaka-ku-odha sarudzo pane yegore ra2015 modhi.
Hazvina kujeka nei Apple isina kugadzirisa chizvarwa cheIntel processors chakashandiswa muMacBook Air kubvira 2015. Zvinganzwisisike kana mutengo wacho wanga wadonha pamuenzaniso zvichiratidza mamiriro ayo akaderera, asi mutengo uchiri wakakwira - uye kubvira kupera kweiyo 11in MacBook Pro muna2016 mutengo wekupinda i $ 949 (yaimbova £ 749).
Kufanana neye MacBook Air yekuvandudza muna 2016 (yakawedzera kubva pa4GB kusvika ku 8GB RAM seyowo), izvi zvaive zvisingaite uye zvichitaridza kushungurudzika zvinogumbura. Nekudaro, zvakapihwa kuti munhu wese aive achitarisira kuti MacBook Air ichauraiwa zvakanaka, nenyaya yekuti iripo inopa nyaradzo kune vateveri vayo.
Ko MacBook ichadzosera MacBook Air here?
Mimwe mishumo iri kuratidza kuti Apple iri kuronga kutumira 13in MacBook muna 2018 - uye panguva imwechete kurega MacBook Air.
Maererano neDigiTimes ripoti muna Ndira 2018, iyo kambani iyo parizvino inopa maLCD eMacBook yaona kuwedzera kwemirairo - kusanganisira maodhi ekuratidzwa kwe13in. Iko zano nderekuti Apple iri kuronga kutumira 13in MacBook muna 2018, ichitsiva iyo MacBook Air.
Kupera kweMacBook Air kwakafanotaurwa kwenguva yakati. Kudzoka muna Gumiguru 2016 Apple yakabvisa iyo 11in MacBook Air kubva mukutengesa pamwe nenhaka yeMacBook Pro ine SuperDrive, iyo yanga yakahwanda muApple Chitoro kwemakore akati. Ipo iyo 13in MacBook Air yasara, haina kunyatso kuvandudzwa kubva munaKurume 2015, kunze kwekutama kuti upe zvaimbove zvekuvaka-ku-kuraira 8GB RAM uye maprosesa esarudzo seyakajairwa.
Chimwe chikonzero cheApple kukanda Mhepo dhizaini: haina kungoita sekuputsika ikozvino sezvazvaive makore gumi apfuura payakatanga. Pakatanga MacBook Air, nzvimbo yayo huru yekutengesa yaive yakatetepa uye yakareruka dhizaini, saka iro zita, asi iyo MacBook neMacBook Pro ikozvino inopfuura iyo munzvimbo idzodzo. Uyezve, kune avo vari kutsvaga kwekupedzisira kutakurika kune iyo iPad Pro ine 12.9in skrini.
Panyaya yehuremu MacBook Air inorema 1.35kg nepo MacBook Pro inorema chete chidimbu chete pa1.37kg uye MacBook inorema chete 0.92kg. Kana Apple ikaramba ichitengesa iyo MacBook Mhepo pamwe inofanira kudonha Mhepo kubva pazita racho.
Hazvina kuipa zvese, zvakadaro. Iyo MacBook Air iri mbiri ine simba uye £ 300 yakachipa pane iyo MacBook. Ndiyo yega Mac laptop inowanikwa isingasviki £ 1000. Nechikonzero ichocho isu tinoramba tichikurudzira, kunyangwe iwe uchigona kuita zvirinani kutenga a yakagadziridzwa MacBook Pro kana iwe uchida Mac iyo inodhura mari isingasviki £ 1000.
Tichifunga kuti MacBook Air ndeye Apple yakaderera mutengo Mac laptop iwe waunofunga kuti ndiyo ichave inonyanya kufarirwa modhi, uye zvakadaro, sekutaura kweApple muongorori Ming-Chi Kuo (shure 2015), iyo 12in MacBook ikombuta inotengeswa zvakanyanya neApple, inoteverwa zvakanyanya ne13in MacBook Pro. Maona zvimwe MacBook runyerekupe apa.
Saka isu zvinoita sekunge 13in MacBook Air inozotsiviwa, asi isu hatifunge kuti izvozvo zvichaitika mutengo weMacBook usati watanga uye pamwe iyo yekupinda-chikamu MacBook Pro, yaderedzwa. Nhoroondo inoratidza kuti izvi ndizvo zvazvichaitika: kekupedzisira paine Mac laptop yaive nemhando yepamusoro kupfuura yemhando inodhura pakatangwa MacBook Air padivi peiyo machena machena uye matema MacBooks. Iwo mamodheru akazogumiswa uye mutengo weMacBook Air wakadzikiswa.
Isu tinotarisira kuti zvakafanana zvichaitika, paine itsva gumi nemaviri MacBook mapeji ari kutengeswa akaderera pane zvaari iye zvino uye kutsiva iyo 12in MacBook Mhepo seyero yekupinda MacBook, nepo mamwe mafungidziro akanyanya achazopihwa ne13C MacBook Pro.
Heino chikonzero hazvina basa kuti MacBook inodhura uye inopihwa simba.
Tichave tichivandudza chinyorwa ichi seimwe ruzivo nezveMacBook Air nyowani inobuda saka tarisa kudzoka nguva nenguva kune nhau dzichangoburwa.
Ndiri kufunga kuti ndeipi MacBook yakanakira iwe? Verenga: MacBook Air vs MacBook Pro kuenzanisa ongororo: 13in Apple laptops yakaenzaniswa
Iwe ungadawo kuverenga yedu Ndeipi Mac? Yakanyanya Mac vatengi vatungamiriri | Apple runyerekupe uye kufungidzira kwe2017
Ndeipi Mac processor? Mac processor kuenzanisa: M1 vs Intel